Ahoana ny fomba fanaovana tanimanga polimer vita an-trano | Asa tanana
Ahoana ny fomba fanaovana tanimanga polimer vita an-trano
Irene Gil | | Asa-tanana sy fitaovana
Imbetsaka aho no mampakatra lahatsoratra natokana ho an'ny tanimanga polimer, azo ovaina ary azo ampiasaina amin'ny tsy tambo isaina Asa-tanana. Samy manao sarivongana, manao rojo vy na firavaka. Fitaovana tiako io ary mahafinaritra be koa ny miara-miasa amiko.
Ny hany lesoka dia ny vidiny satria tsy hoe lafo loatra izany, nefa lafo loatra ny tsy mividy azy raha tsy azontsika antoka hoe inona no hataontsika aminy na raha ho fantatsika ny fomba hanomezana azy fampiasana tsara. Noho izany antony izany, amin'ity lahatsoratra anio ity dia mampakatra fomba fahandro hatao tanimanga polimer vita an-trano ary mba hahafahanao mitsapa sy milalao ny fitaovana amin'ny fomba mora vidy kokoa
La tanimanga polymer, fantatra koa amin'ny hoe Fimo, dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra eto amin'ity tontolon'ny famoronana sy sary an-tsaina ity. Noho io dia afaka mamorona ny endrika rehetra miseho ao an-tsaintsika isika ary misy valiny mihoatra ny tsy mampino. Fantaro izay rehetra ilainao momba azy!
1 Inona ny tanimanga polymer?
2 Fitaovana fanaovana tanimanga polimer
3 Ahoana ny fomba hanaovana tanimanga polimer vita an-trano
4 Ahoana ny fampiasana tanimanga polimer?
5 Aiza no hividianana tanimanga polimer?
6 Ny marika malaza amin'ny tanimanga polimer
7 Asa-tanana amin'ny tanimanga polimer
Inona ny tanimanga polymer?
Hatramin'ny nanoloranay azy io tamin'ny vokatra kintana, ankehitriny dia tsy maintsy fantarintsika tsara izay lazaintsika. Ny tanimanga polimer dia pika azo ovaina. Azo antoka fa isika rehetra dia mahatadidy ny playdough nampiasantsika fony isika mbola kely. Eny, mitovy be amin'ity izy ity. Afaka ampiasain'ny tanora sy ny tanora kokoa izy io, satria mora be ny miasa ary tsy mila karazana olana izany.
Ny fahasamihafana mety hitantsika momba ny plastika dia ity tanimanga ity afaka mampifangaro loko. Raha mampifangaro loko roa ianao dia hahazo vokatra marbra tena tany am-boalohany ary raha mbola mihalava ny fotoana fampifangaroana ianao dia hahazo fitambarana homogeneous.
Fitaovana fanaovana tanimanga polimer
1 vilany teflon.
1 kaopy amin'ny lakaoly fotsy sekoly (mividy eto).
1 kaopy amin'ny vovoka katsaka.
Tablespoons 2 menaka mineraly.
1 sotro ny voasary makirana.
Powder tempera samy hafa loko. (mividy eto)
Ahoana ny fomba hanaovana tanimanga polimer vita an-trano
Hafangaronay ao anaty vilany Teflon daholo ireo akora rehetra apetraka amin'ny hafanana ambany. Raha tiantsika ny hanana loko ny koba dia hametaka ireo vovo-dronono ny loko tadiavina ao anaty akora, raha tsy izany dia ho fotsy ny koba.
Raha vantany vao ananantsika ireo akora ao amin'ny vilany Teflon, ny hifangaro mandritra ny folo minitra amin'ny hafanana ambany izahay mandra-pahatapitry ny koba. Avy eo, esory amin'ny hafanana izy ary avelao hangatsiaka. Afetaho mandra-pahatonga azy ho firafitra mahafinaritra sy azo tanterahina. Farany, hitahiry azy dia mila mitazona azy ao anaty siny tsy misy rivotra.
Amin'ny sary etsy ambony dia afaka jerena ireo sanganasa vita amin'ny tanimanga polimer afaka manao ny tenanareo ianareo.
Ahoana ny fampiasana tanimanga polimer?
Fantatsika izao fa pika azo ovaina izy io, tsy maintsy mameno ny fampahalalana milaza ny fomba fampiasana na fitsaboana an'io tanimanga io isika. Voalohany indrindra, tsy maintsy mamolavola azy isika. Mba hanaovana izany dia hieritreritra tarehimarika iray ianao sy ny hamolavola amin'ny tananao ianao. Amin'ny hafan'ireto dia ho mora sy mora kokoa ny mitantana ny tanimanga. Raha vantany vao noforonina ilay tarehimarika dia tsy maintsy entinao amin'ny lafaoro izy io. Eny, avelanao ao anaty lafaoro mahazatra mandritra ny minitra vitsy. Isaky ny fitoeram-tanimanga tsirairay dia asehon'izy ireo ny fotoana tokony avelanao azy io fa amin'ny ankapobeny dia 15 minitra eo ho eo foana izy io. Rehefa esorinay amin'ny lafaoro izy dia avelao hampangatsiatsiaka ary avy eto, azonao atao ny manapaka azy na mandoko ny sary nataonao. Tsotra toa izany !.
Aiza no hividianana tanimanga polimer?
Ireo toerana voalohany tokony halehantsika afaka mividy tanimanga polimer, dia fivarotana fitaovam-pitaterana sy fivarotana asa-tanana. Tokony holazaina fa, na dia vokatra miha malaza aza izy io, dia tsy hisy iray amin'ireo toerana rehetra ireo. Indraindray mety ho somary manahirana ho antsika izany, saingy hanana Internet foana isika. Misy pejy maromaro, ao koa ny asa-tanana izay ahitanao azy ireo. Mila mitady ireo izay tsy dia lafo akory ny vidin'ny fandefasana azy satria tsy tianay ny hiakatra mihoatra ny ilaina ny vidiny farany.
Ny marika malaza amin'ny tanimanga polimer
Araka ny efa noresahintsika tany am-piandohana, ity fitaovana ity dia antsoina koa hoe Fimo. Na dia tsy maintsy tsaroana aza fa Fimo dia anaran'ny marika tanimanga voafaritra ary tsy izany no anarana mahazatra. Manomboka amin'ity fototra ity dia fantatrao fa amin'ity anarana ity dia afaka mahita tanimanga any Espana ianao. Hanana karazany roa ianao ao anatiny:
Fimo Classic: Somary sarotra kokoa ny mamolavola azy, nefa maharitra ihany koa.
Fimo Soft: Vonona hampiasaina izao. Fa mazava ho azy, somary marefo kokoa izy io ary mora vaky.
Etsy ankilany, ho hitanao ihany koa ny marika Sculpey sy Kato. Noho izany, tsy hanana fialantsiny intsony ianao hahafahana miasa miaraka amin'izy ireo.
Soso-kevitra ny hanombohana tarehimarika kely sy tsotra nefa azo antoka fa tsy ho ela dia hamoaka ny eritreritrao ianao ary hahita ny fomba hivoahan'ny lalan-dra kanto ao anatin'ny segondra vitsy. Handeha hiasa ve isika?
Asa-tanana amin'ny tanimanga polimer
Betsaka ny olona mieritreritra an'izany tanimanga polimer Tsy afaka mamorona tarehimarika fotsiny ianao, ary na dia io aza no hitanao indrindra, ity karazana tanimanga ity dia manome safidy maro hafa.
Raha te hanao sary ianao ary manomboka, dia mety ho mora aminao kokoa ny manomboka saribakoly mora ary miaraka amin'ny antsipiriany vitsy. Amin'ny Internet ianao dia hahita "tsikelikely" amin'ny sary izay ampianaran'izy ireo anao mba hanaingoana ny faritra tsirairay amin'ilay sary.
Ny sasany amin'ireo tarehimarika izay matetika no atao dia tsotra sy tena lamaody, sakafo fanao kawaii izy ireo. Tena mahazatra ny manampy keychain, mametraka azy ireo ho toy ny kavina, rojo na haingon-trano ho an'ny pensilihazo na penina.
ihany koa afaka mamorona voninkazo sy zavamaniry ianao pHandravaka. Ny valiny dia tena tsara. Manampy ny tenanao amin'ireo mpanapaka sy fitaovana hahafahanao mamorona famaranana tsaratsara kokoa. Andininy iray, azonao atao ihany koa ny mampiasa mpanety mofomamy, satria ny fondant na ny cookies dia mitovy amin'ny ampiasaina amin'ny tanimanga.
Ho hitanao fa amin'ny fampiharana kely dia afaka mamorona voninkazo tena misy mihitsy aza ianao.
Araka ny efa nolazaiko teo dia tsy mila manao tarehimarika fotsiny ianao, ny haingo sambos mety safidy hafa. Manana hevitra an'arivony ianao izay hanome aingam-panahy anao handravaka sy hanamboatra ireo siny fitaratra izay ampiasainao isan'andro. Ary koa, raha mampiasa tanimanga fanaova polymerika ianao dia tsy hanana olana amin'ny fametrahana ny ampahany manontolo ao anaty lafaoro, hihazona tanteraka ny vera. Mitandrema, aza mampiasa baoritra plastika amin'ity tranga ity dia hihena be ny asanao.
Ho fanampin'izany rehetra izany dia misy teknika haingo miha-fantatra eo amin'ny tontolon'ny tanimanga polymer antsoina hoe "millefiori" na amin'ny Espaniola "voninkazo an'arivony". Misy ao manambatra ireo sombin-tanimanga polimerina mba hanamboatra fantsona tapahina ho silaka ary asehoy ny sary nataonao, na abstract na amin'ny sary manokana. Tany am-piandohana dia noforonina ny voninkazo, saingy nivoatra izy io ary ankehitriny dia afaka mahita ny zava-drehetra ianao.
Manantena aho fa hitanao fa mahasoa azy io ary amin'ny manaraka DIY.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » Asa-tanana sy fitaovana » Ahoana ny fomba fanaovana tanimanga polimer vita an-trano
Lahatsoratra tena tsara, misaotra anao nizara azy, tsy fantatrao ny fomba ahafahanao manamboatra tanimanga polimer ny tenanao, tonga izao ny fotoana hampiharana azy.
Salama, azafady, apetraho ny fanontaniana iray, inona ny atao hoe vovoka Mipetraka any Mexico aho ary tsy azoko antoka raha azoko tsara ny anao, raha miteny ianao hoe tempera dia loko vovoka no tianao holazaina ary raha izany, legioma ve sa ahoana?
Valiny tamin'i Samantha
Salama, te hahafantatra aho raha afaka manolo ny menaka mineraly amin'ny menaka iraisana na menaka hafa?
Salama, fanontaniana roa
1. Inona ny mari-pana amin'ny vovoka? Mety ho aniline ve? Izay ampiasako amin'ny porselana mangatsiaka ary saika mitovy ny fangaro ao anatiny
2. Tsy maintsy atao ve ny lafaoro ary / na mandeha ny microwave?
Bianca scheiber dia hoy izy:
Aza milaza fa tanimanga polimer io, manao paty an-trano ianao, paty mangatsiaka na porselana frantsay, aza ampidirina amin'ny fahadisoana ny olona, ​​tsy azo atao ao an-dakozia ny tanimanga polimika satria mitaky fizotry ny simika sarotra ny famelabelarany
Mamaly an'i Bianca Scheiber
Azafady azafady ny hafatrao, tsy tanimanga polimer io, ity karazana porselana namboarina. Ny tanimanga polimerana dia mitaky fizotry ny simika sarotra, araka ny anarany, polymer na plastika pvc izy io izay mila laboratoara feno sy ampy fitaovana hanaovana azy. Aza afangaro ny olona, ​​modeller tanimanga polimer aho ary ity misy inona fa ny fitaovana hiarahako miasa.
Aza afangaro ny olona !!!
Izay lazainao dia TSY tanimanga polimer.
Ny Polymeric dia paty iray miorina amin'ny PVC, polymer plastika vita amin'ny molekiola (monomérer) marin-kazo klôrozy vinyl. Ny fizotry ny polymerisation vinyl chloride dia misy poizina tokoa ary miseho any amin'ireo ozinina ao amin'ny reactors voaisy tombo-kase.
Salama, rahampitso tolakandro ,, ny lafaoro dia tsy maintsy atao amin'ity karazana asa tanana ity? ,, misaotra betsaka mialoha !!!
Manaiky aho fa tsy tanimanga polimerika io fa porcelain an-trano mangatsiaka. Na inona na inona fanasitranana azy amin'ny lafaoro, avelao ho maina izy io, raha asitrika ao anaty rano ilay sombin-javatra dia mihalefy izy io, izay tsy mitranga amin'ny tanimanga polymer tena izy, izay mety anaty rano tsy misy olana, satria mijanona ho toy ny PVC zavatra
Tsara ho an'ny asa tanana sasany izy io, ary tsy lafo ny fiarahana miasa amin'ny ankizy. Saingy tsy maharitra amin'ny fotoana izy io
Bellanira Melendez dia hoy izy:
Misaotra betsaka, ny fampiasana an'ity vokatra ity no nanazava betsaka ahy. Any amin'ny fireneko dia mbola tsy manana an'ity vokatra ity isika, misaotra anao mipetraka any Panama aho, ny marina tsy haiko raha mivarotra azy ireo izy, niara-niasa tamin'ny porselana mangatsiaka aho. MISAOTRA
Valiny tamin'i Bellanira Meléndez
www.lacasadelaarcilla.es dia hoy izy:
Tsara ny lahatsoratra, manina ny tanimanga polymer izahay miaraka amin'ny PVA, polyvinyl alchohol izay tanety polimerika maina, ary atolotray ny tanimanga koreana satria tena tsara kalitao izy ireo.
Heveriko fa nanana hevitra mahafinaritra ianao rehefa nilaza ny fomba hanaovana tanimanga mitovy amin'ny ao an-trano ary ny simika izay tsy mampidi-doza ary misy polymers dia lakaoly.
Valio ny www.lacasadelaarcilla.es
Salama! Namaky tamim-pitandremana ny hafatrao aho, tsy nazavainao tsara hoe inona ny diplaoma namboarina. Misaotra Miarahaba anao avy any Arzantina
DIY ny fomba fanaovana kahie lohataona amin'ny ravina iray.